Fanakorontanana mahery setra - Vakio Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics an-tserasera
Fanakorontanana masiaka Average 4 / 5 avy amin'ny 31
Faha-70, manana fomba fijery 50.4K
tantara an-tsehatra, Romance
Tongasoa eto amin'ny tranonkalantsika mahafinaritra izay azonao atao vakio ny manhwa tsara indrindra, webtoon ambony, sy maro hafa manga maimaimpoana.
Vakiana ianao Scandal Beastly, mahafinaritra manhwa.
Raha manana ianao mamaky Manga ary te-hahita zava-baovao avy Manhwa or Manhua na te hijery fotsiny ireo tranonkala tsara indrindra dia izao no tranonkala ho anao.
Lady Annabelle Marchant dia belle an'ny baolina tany London mandra-pahatongany nampiasa ny sainy ara-tsaina mba hanavotana ny ain'olona. Tsy nahomby izy tamin'ny farany, namela azy maty sy afa-baraka. Ny hany tadiaviny dia ny fotoana hampiononana ny mpitondratenany amin'ny fanadiovana ny fanahin-dravehivavy amin'ny toe-tsain'ny vadiny. Saingy ny zanakalahin'ilay mpitondratena, ilay bibidia Tompon'ny Manor, dia miampanga azy ho tonga any an'ala any Cheshire hanangona azy ho vady. Maharikoriko izaitsizy izy, mikiry hanaporofoana fa diso izy.
… Nanjary PERSONA TSY GRATA…
Rufus Marlesbury, ilay Earl of Terrance, dia ahiahiana ho namono ny rainy. Tonga nody izy mba hanadio ny anarany tamin'ny alàlan'ny fitadiavana ilay tena mpamono alohan'ny taona vaovao na hiantsoana eo alohan'ny House of Lords i Rufus hamaly ny asa ratsy nataony. Tsy manam-potoana handany vola amin'ny fialana amin'ny tsy fahatantesana ny eritreritra momba ny fanambadiana izy izay nanadihady fanasana ho any an-tranony amin'ny alàlan'ny filalaovana ny tahotra mafy indrindra nahazo ny reniny.
… REHEFA MISY MPAMONO olona eo an-tampon'ny RAMPAGE
Miaraka amin'ny matoatoa tsy voafehy mampihorohoro ny mponina sy ny faty miangona ao an-tanàna, Belle dia tsy maintsy mitady fomba hahitana ilay lehilahy eo ambanin'ilay biby ary Rufus dia tokony hianatra hino ny fitiavan'ny vehivavy iray izay tsy manana antony hatokisana azy. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa ihany no ahafahan'izy ireo manakana matoatoa valifaty alohan'ny hampijaliana ny vahiny na alohan'ny hamelezan'ny mpamono olona indray.
Chapter 54	Jolay 25, 2021
Chapter 53	Jolay 21, 2021
Chapter 52	Jolay 17, 2021
Chapter 51	Jolay 10, 2021
Chapter 50	Jolay 10, 2021
Chapter 49	Jolay 10, 2021
Chapter 48	Jolay 2, 2021
Chapter 46	Jona 27, 2021
Chapter 45	Jona 27, 2021
Chapter 44	Jona 27, 2021
Chapter 43	Jona 27, 2021
Chapter 42	Jona 27, 2021
Chapter 41	Jona 27, 2021
Chapter 40	Jona 27, 2021
Chapter 39	Jona 15, 2021
Chapter 38	Jona 15, 2021
Chapter 37	Jona 15, 2021
Chapter 36	Jona 15, 2021
Chapter 35	Jona 15, 2021
Chapter 34	Jona 15, 2021
Chapter 33	Jona 15, 2021
Chapter 32	Jona 8, 2021
Chapter 31	Jona 8, 2021
Chapter 30	Jona 8, 2021
Chapter 29	Jona 8, 2021
Chapter 28	Jona 8, 2021
Chapter 27	Jona 5, 2021
Chapter 26	Enga anie 26, 2021
Chapter 25	Enga anie 26, 2021
Chapter 24	Enga anie 18, 2021
Chapter 23	Enga anie 18, 2021
Chapter 22	Enga anie 18, 2021
Chapter 21	Enga anie 5, 2021
Chapter 18	Janoary 18, 2021
Chapter 17	Janoary 12, 2021
Chapter 16	Janoary 4, 2021
Chapter 15	Janoary 4, 2021
Chapter 14	Desambra 23, 2020
Chapter 13	Desambra 23, 2020
Chapter 12	Novambra 9, 2020
Chapter 11	Novambra 9, 2020
Chapter 10	Oktobra 24, 2020
Chapter 9	Oktobra 8, 2020
Chapter 8	Oktobra 8, 2020
Chapter 7	Oktobra 8, 2020
Chapter 6	Aogositra 31, 2020
Chapter 5	Aogositra 31, 2020
Chapter 0	Aogositra 29, 2020
Izaho vaovao tanteraka
Janoary 9, 2021
Tamed a Tyrant and Ran Away
Hanavotra fianakaviana mendrika aho